Spafinder Wellness ndiyo imwe yezvinhu zvakanakisisa zvepasi rose zvekurarama zvakanaka nekuona zvakanaka gore rese. Kuchengetedza zvakanaka chinhu chezuva nezuva. Iyi pfungwa yekuchengetedza zvakanaka 365 mazuva egore inomiririra hutano hwekambani hwekuchengetedza muviri, mweya uye pfungwa, kubatanidza zvose Workplace Wellness 365 uye Spafinder Wellness 365 brand.
Spafinder inoziva kuti hutano hunoreva zvinhu zvakasiyana kune vanhu vakasiyana-kubva kuBeautiful to Fitness, Mindset kusvika kuPoresa, kudya kunovaka muviri nekuchengetedza, hukama hwekutamba. Iyo yakagadzirirwa kubatsira vhizimusi, vatengi, vashandi, uye vashandi vanowana nzira yavo pachavo kune hukama nehuchenjeri, kufemerwa, uye pfungwa dzinoita kuti zvirambe zviri nyore uye zvinowanikwa nyore, zuva rega rega rega rega.
Uine Spafinder Wellness 365 brand, unogona kudzidza pamusoro pehutano hwehutano kana hwehutano, bhuku rekudzidzira muviri kana machira ekurapa, kutenga kadhi yechipo kune munhu chaiye muupenyu hwako, kushandisa zvido zvekutengesa kwemaawa ekupedzisira, ona nzvimbo dzakanakisisa dzekufamba, kana kungoita kungoita nguva yekurarama zvakanaka pane imwe yenzvimbo dzakanaka dzinoita Spafinder yenyika yose. Dzvanya chinyorwa che Spafinder chiri pasi apa kuti uwane mamwe mashoko